Namanje asikaqedwa ukwakhiwa isikole saseNtuzuma | News24
LAST UPDATED: 2019-11-12, 16:07
Namanje asikaqedwa ukwakhiwa isikole saseNtuzuma
Durban - Nakuba sesivulwe ngokusemthethweni isikole iDuduzane Primary, esiselokishini eNtuzuma, eThekwini, kubikwa ukuthi asikaqedwa ukwakhiwa.
Ngesikhathi iziphathimandla zivakashele kuso ngenyanga edlule, uNgqongqoshe wezeMfundo uMthandeni Dlungwane, owathi umnyango uchithe u-R15.9m wakha isikole, uthe uyazi ngezinkinga ezibhekene nesikole. Uthembisile ukuthi zizolungiswa.
Umthombo ongaphakathi esikoleni, ongathandanga kudalulwe igama lawo, uthe: "Amakhebula ayazilengela nje emakilasini kanti futhi ugesi uyahlupha...akuphephile," kubika iGroundUp.
OLUNYE UDABA:Kubhikishe umphakathi ngesikole esishoda ngamakilasi eLimpopo
Kuphinde kube nepayipi elilodwa lamanzi elisetshenziswa abafundi abangu-1 441. Amathoyilethi nawo awaqediwe ukwakhiwa.
Uthishanhloko okhona njengamanje esikoleni, uThandi Lushaba, waqala ukusebenza kulesi sikole ngo-1995.
Kusukela ngo-1991 kuya ku-1995 izingane zazifundela ngaphansi kwesihlahla kulesi sikole. Kuthe ngo-1995, zaqala zafundela emakilasi okubambisa. Uma lina izulu, abafundi babegodukiswa njengoba amanzi emvula ayengena ngophahla. Uma lishisa kakhulu ilanga, amakilasi ayeshisa bese kudingeka ukuba kuyekwe ukufundwa.
Ngo-2012 isikole saqala ukwakhiwa. Othisha nabafundi babekhona, ukufunda nokufundisa akuzange kumiswe. Abazali nebhodi elengamele isikole "basebenzisana nathi kwaze kafika la", kusho uLushaba ngokukhulu ukuziqhenya.
UDlungwana, ekhuluma nabazali kanye nabafundi kuvulwa isikole, uthe kube khona izinkinga eziningi nomakhi kwadingeka ukuthi ungabe usaqhubeka umsebenzi.